Retro Xiinka udugga Diffuser - Design fiican & Sameeyo Co., Ltd
Home » Product » Price Low
Retro Xiinka udugga Diffuser
Ku raaxayso aragnimada udugga kama dambaysta ah la Diffuser ah udugga Retro Xiinka. Powered by xadhig awood (waxaa ka mid ahaa), design dhimatay this diffuser cute yar ee ka dhigayaa fiican ee qolka kasta. Tani diffuser udugga ultrasonic ogolaan doonaa inaad si ay u damiyaan saliidaha aad ugu jeceshahay lagama maarmaanka ah ee miiska aad shaqada, Dhinaca sariirta ama meel kale oo yar yar oo kasta. Features Laba goobaha heerka ceeryaamo waddaa 4-6 Saacadaha (waqti Orod kala duwan iyadoo ku xiran meesha ceeryaamo isticmaalo) Moisturize oo isqabooji ahaayeen tayada hawada ...
Ku raaxayso aragnimada udugga kama dambaysta ah la Diffuser ah udugga Retro Xiinka. Powered by xadhig awood (waxaa ka mid ahaa), design dhimatay this diffuser cute yar ee ka dhigayaa fiican ee qolka kasta. Tani diffuser udugga ultrasonic ogolaan doonaa inaad si ay u damiyaan saliidaha aad ugu jeceshahay lagama maarmaanka ah ee miiska aad shaqada, Dhinaca sariirta ama meel kale oo yar yar oo kasta.
Laba goobaha heerka ceeryaamo
waddaa 4-6 Saacadaha (waqti Orod kala duwan iyadoo ku xiran meesha ceeryaamo isticmaalo)
Moisturize oo isqabooji tayada hawada la ceeryaamo qaboojinta ah
Isticmaali technology ultrasonic sare iyo design a dhimatay
Diffuser shaqeeya adigoo isticmaalaya technology ultrasonic inay burburto biyaha iyo saliidaha lagama maarmaanka ah / Caraf udgoon daryaa gelin aad u wanaagsan micro-Qurub, baahinta caraf udgoon hawada sida ceeryaamo aan kulaylka.
diffuser udugga australia
diffuser udugga taayirrada Canada
udugga soo dejiso diffuser
udugga Malaysia diffuser
udugga NZ diffuser
udugga la surto oo diffuser
diffuser udugga Singapore
diffuser udugga USA
udugga jumlada diffuser
aad fariin noogu soo diri:
190ml Reed Dabiiciga Oil Diffuser la Reed Rattan Ulo caraf Home
Dhimatay Heart Air dalool Hawo Car Clip-on
design fiican iyo soo saaridda co., Ltd
© Copyright - 2010-2017 : design fiican iyo soo saaridda co., Ltd All Rights Reserved.